Madaxweynihii Hore ee Somaliland Md. Siilaanyo oo Khudbadiisii U Dambaysay Jeediyey – WARSOOR
Hargeysa – (warsoor) – Madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Somaliland,Mudane Axmed Maxamed Silaanyo oo khudbadiisi u danbaysay ka jeediyey maanta Xafladii Xil-wareejinta Madaxweynaha la dhaariyey ee talada dalka la wareegay maanta waxaanu yidhi Mudane Axmed Silaanyo “Bismillaahi Raxmaani Raxiim,
Ugu horreyn, dhammaan Mudanka iyo Marti-sharafta kala duwan ee fadhida madashan qiimaha badan, iyo qaybaha kala duwan ee Shacbi-weynaha Somaliland, ee warbaahinta iyo muuqaal tabiyaasha tooska nagala socda, waxaan idinku salaamayaa duco xambaarsan nabadgelyo iyo naxariis EEBE “Asalaamu Calaykum, Wa Raxmatullaahi, Wa Barakaatuhu”
Maanta waxaynu joognaa munaasibad taariikhi ah iyo dharaar ku weyn dareenka Shacbi-weynaha Jamhuuriyadda Somaliland, oo dhan. Si gaar ah, waxay aniga dhacdadani, igu leedahay xusuus ma guuraan ah, oo saamayn togan ku leh, nafteyda iyo sooyaalkayga nololeed. Farxad iyo rayn-rayn aan la soo koobi karin ayey ii tahay, in aan fagaarahan il-yartu is-qabatay ku wareejiyo, xilkii iyo mas’uuliyaddii qaranka, ee dummadayda saarnayd, isla markaana aynu halkan ku caleemo saarno Madaxweynaha cusub, ee i beddeli doona, daqiiqado yar ka dib.
Waxaynu ummad ahaan ku guulaysannay, in aynu qabsanno 13-kii, Bishii November, 2017-ka, Doorashadii Madaxtooyada, taasoo taariikhda markii ugu horreysay si haboon, uga wada hirgashay, dhammaan dhulka Somaliland. Doorashadaasi, waxay ahayd mid xor iyo xalaal ah, oo aduun-weynuhu inagu majeertay, isla markaana aynu ku helnay, magac weyn iyo maamuus aan la soo koobi karin.
Sidaa darteed, duco-qabayaal,
Waxa inala gudboon, in aynu adkayno midnimadeena iyo wada-jirkeena, isla markaana aynu meel uga soo wada-jeesanno, kuwa fara ku tiriska ah, ee ku foogan fad-qalalada iyo furfurka qarankeena.
Waxaan uga mahad-naqayaa, Shacbiga iyo Dawladda Fadaraalka Itoobiya, ee aynu deriska nahay, oo uu hormoodka ka yahay Raysal Wasaare Hailemariam Desalegn, sidii wanaag-sanayd ee saaxiibtinimada lahayd, ee aannu u wada-shaqaynay, isla markaana aannu iskaga kaashannay danaha iyo arrimaha labada dal, muddadii aan xilka hayey. Sidoo kale, waxaan uga mahad-naqayaa, Shacbiga iyo Dawladda Dalka aynu deriska nahay ee Jamhuuriyadda Jabuuti, ee uu hormoodka ka yahay Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle, sidii wanaag-sanayd ee saaxiibtinimada lahayd, ee aannu u wada-shaqaynay, isla markaana aannu iskaga kaashannay arrimaha labada dal, muddadii aan xilka hayey.
Maanta xilkii aan idiin hayey, waxaan si rasmiya ugu wareejinayaa Madaxweynaha la doortay Mudane, Muuse Biixi Cabdi, oo ah hoggaamiye aan ku kal-soonahay in uu si wacan idiin hagi doono. Mudane, Muuse Biixi, wuxuu noqonaya goor-dhow, marka la dhaariyo, Madaxweynihii Jamhuuriyadda Somaliland. Wuxuu Madaxweyne u noqonayaa, taageerayaasha Saddexda Xisbi Qaran, iyo dhammaan Bulshada Somaliland, mid u codeeyey, iyo mid ka codeeyey.
Muddadii aan talada dalka iyo dadka, midida daabkeeda hayey, ma ogi, si badheedh ama ula-kac ah, cid aan aniga iyo maamulkaygu toona, aannu xad gudub ama tacadi ku samaynay. Hase yeeshee, waxaanu nahay bashar gefi kara, sida annagaba naloogu gefo. Sidaa darteed, waxaan shacbi-gayga qiimaha badan leeyahay, aan isa-saamaxno, isla markaana isu soo ducayno, (Saamax naakum, if iyo aakhiroba).
Waxaan ALLE ka baryayaa, inuu Bulshada Somaliland bash-bash iyo barwaaqo gaadhsiiyo.